Sei Kuwedzera Yemagariro Midhi Kubatanidzwa | Martech Zone
Isu munguva pfupi yapfuura takagovana infographic uye chinyorwa chakatsanangura matanho masere ku kuvhura yako vezvenhau zano. Vazhinji venyu makatotanga hurongwa hwenyu hwezvemagariro asi vangave vasiri kuona kuwanda kwakawanda sezvawaitarisira. Zvimwe zvacho zvinogona kunge zvichichenesa algorithms mukati memapuratifomu. Facebook, semuenzaniso, ungangobhadhara iwe kubhadharisa zvemukati pane kuzviratidza pachena kune chero munhu anotevera zita rako.
Izvo zvese zvinotanga, chokwadika, nekugadzira yako brand kukoshesa kutevedzera.
Nei Vatengi Vachitevera Brands Pamhepo?
mubereko - 26% yevatengi vanoti iyo mhando inokodzera zvido zvavo
Kupa - 25% yevatengi vanoti iyo mhando inopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kana masevhisi
unhu - 21% yevatengi vanoti iyo mhando inokodzera hunhu hwavo
Mazano - 12% yevatengi vanoti iyo mhando yakakosha kukurudzira kushamwari nemhuri
Kugarisana Nevanhu - 17% yevatengi vanoti iyo mhando ine hukama munharaunda
Izvo zvakati, kana usiri kuona iko kubatanidzwa kwauri kutarisira, iyi infographic kubva kuna Branex, 11 Zvemagariro Kubata Kuwedzera Maitiro Anoshanda Chaizvo, tsanangura mamwe matekiniki aunogona kushandisa:
Tenzi vateereri vako - Ratidza izvo zvinonyanya kukosha kune vateereri vako nekucherechedza zvimwe zvemukati zvakagovaniswa uye zvataurwa pane zvakanyanya… wobva washandisa nzira dzakafanana. Ini ndinoda kushandisa maturusi senge BuzzSumo uye Semrush nekuda kweizvi. Pachinyore, unogona kuongorora mhinduro dzekutsvaga uye maforamu, zvakare.
Gadzirisa zvaunotumira kune yega yega media media chikuva - Natsa vhidhiyo yako, mifananidzo, uye zvinyorwa papuratifomu yega yega. Ini ndinogara ndichishamisika pandinoona mumwe munhu achiburitsa mufananidzo wakanaka… kungoona uchidimburwa mukushandisa nekuti yanga isina kugadzirirwa kuona papuratifomu.
Kushamisa vanhu - Vatengi vanofarira kugovana chokwadi, manhamba, maitiro, tsvagurudzo (uye memes) pasocial media, kunyanya kana iwo ari anonakidza kana akaomarara maonero.
Gadzira zvemukati zvine kumusoro kubatanidzwa -Kwakapihwa sarudzo pakati pekuvandudzwa kwekushandurwa kana kushandurwa kunoshamisa, ini ndoda vashandi vangu nevatengi vapedze nguva yakawanda voita hunoshamisa hunobata pfungwa dzevateereri.
Shanda pamwe nevanokurudzira munharaunda - Vanokurudzira vane kuvimba nekuita kwevateereri vako. Kubaya mavari kuburikidza nehukama, kubatana kwekushambadzira, uye kutsigira kunogona kutyaira vateereri vavo kune yako brand.
Ipa yakajeka kushevedza-kune-chiito - Kana mumwe munhu akawana yako yazvino tweet kana yekuvandudza, iwe unotarisira kuti vaite rinotevera Wakaisa tarisiro iyoyo here? Ini ndinoramba ndichiyambira pamusoro pekutengesa kwakaomarara mukati mekuvandudzwa kwenzanga, asi ini ndinoda kuseka nzira kudzokera kuchipo, kana kupa kushevedzera-ku-chiito muhupenyu hwangu hwevanhu.
Tsvaga iyo yakanakisa nguva yekutumira - Unogona kushamisika neiyi, asi hazviwanzo nezve kana iwe uchitsikisa, ndezve apo vanhu vanodzvanya-uye nekugovana zvakanyanya. Ive neshuwa kuti uri kugara kumberi kweiyo curve. Kana, masikati, mabhatani-mitengo ari pamusoro… saka iva nechokwadi chekuburitsa masikati masikati munzvimbo dzenguva dzevatengi vako.
Shandisa zviripo mavhidhiyo paFacebook - Iyi ndiyo nzira isiri kubhadhara-kutamba (zvakadaro) uye kuti Facebook iri kuramba ichisimudzira zvine hukasha. Tora mukana weizvi uye enda urarame nguva nenguva nezvakanaka zvemukati zvevateereri vako.
Joinha akakodzera mapoka - LinkedIn, Facebook, neGoogle + vane mamwe makwikwi asinganetsi, ane hupenyu nekutevera kukuru. Shambadzira ruzivo rwekukosha kana kutanga hurukuro huru mumapoka aya kuti uzviise sechiremera chakavimbika.
Goverana zvemukati wakanaka - Haufanire kunyora zvese zvaunogovana. Semuenzaniso, iyi infographic haina kugadzirwa kana kuburitswa neni - yakaitwa na Branex. Nekudaro, izvo zvirimo uye matipi ayo aisanganisira anowirirana zvakanyanya nevateereri vangu, saka ndiri kuzogovana! Izvo hazvibvise simba rangu muindastiri. Vateereri vangu vanofarira kuti ini ndinowana uye ndinowana zvakakosha zvemukati senge izvi.
Bvunza mhinduro - Kuchinjisa vateereri kunharaunda kunoda kutaurirana. Uye kutamisa nharaunda kuvarevereri kunoda toni yekushanda nesimba. Kumbira vateereri vako kuti vataure uye upindure kwazviri kuti ukure kudyidzana kwevanhu munharaunda!
Heano akazara infographic kubva Branex:
Hazvina kukwana? Heano mamwe mamwe kubva Around.io, 33 Nyore Nzira dzekusimudzira Yako Yemagariro Midhiya Engagement Izvozvi.
Kubvunza mibvunzo mune ako magariro mapositi anoita kuti vanhu vataure, vachiwedzera kubatanidzwa pane ako mapositi. Bvunza yakatarwa, yakanongedzwa mibvunzo pachinzvimbo cheizvo zvinoita sekutaura.
AMA dzakashanda zvakanyanya paReddit uye Twitter. Zvino, zvinoshanda kwazvo paFacebook futi. Rega vanhu vazive kuti iwe uchapindura zvine simba mibvunzo yese (pane yakatarwa musoro wenyaya) kwemaawa akati wandei.
Kana mutengi achishandisa chigadzirwa chako uye anotumira nezvazvo (chinyorwa chekuongorora kana pikicha kana vhidhiyo), kusimudzira izvo zvemukati kune vateveri vako. Aya marudzi ezvinyorwa (zvemushandisi-zvinogadzirwa zvemukati) zvinokonzeresa kubatanidzwa.
Anything trending ane mukana wakakura wekufarirwa, kugoverwa kana kutaurwa pamusoro pazvo. Tsvaga zviri kuitika uye zvinoenderana nevako vateveri uye uzvigovane nguva dzose.
Tsvaga vashandisi vanoshandisa hashtags uye pindura ma tweets avo nezvakatumirwa: izvi zvinowedzera kubatanidzwa paprofile yako pavano tarisa zvawatumira.
Uyewo, tsvaga mazwi akakosha zvine chekuita nemusika wako uye unoita nevanhu vanoshandisa iwo akakosha mumazita avo.
Nguva dzose pindura kune chero @mention iwe yaunogashira pasocial media - izvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti une hanya uye iwe unoteerera izvo zvinowedzera kuwedzera kubatanidzwa.
Curate uye kusimudzira zvirimo zvevamwe vanhu asi nekubira kudiki: gara uchimaka sosi kuti sosi izive kuti vataurwa. Zvemukati pasina kutaurwa zvinowana zvishoma kuita (dzimwe nguva hapana) pane imwe ine kutaurwa kana maviri.
Tumira izvo zvakanaka kusosaiti uye rega vanhu vazive kuti une hanya navo magariro. Charity, rubatsiro uye nemagariro mutoro kutyaira kubatanidzwa kumusoro.
Mhanyai kupa kana kukwikwidza uko kufarira / kupindura kuri chikamu chechipo / mumakwikwi. Inowedzera otomatiki kubatanidzwa.
Poresai yakawanda maLinks / zviwanikwa uye ugovane navo nezvikwereti (tag sosi yacho). Zvekutaura kukuru zvinowanzo kuwana yakawanda yekubatanidzwa.
Shandisa Trending hashtags paunowana izvo zvinogona kusanganiswa nemusika / brand neimwe nzira.
Tsvaga uye tsvaga mibvunzo inobvunzwa nevanhu (inoenderana nemusika wako) panzvimbo senge Twitter, Quora, Google+ nezvimwe uye nekuvapindura.
Taura a limited-nguva kutengesa/ kuderedzwa kana kuudza mafeni masheya ari kupera pachigadzirwa - kutya-kwe-kurasikirwa-kunobatsira kuchakubatsira iwe kuwana mamwe mabhatani pane ako mapositi.
Paunotumira tweet kana kupindura kunyore, shandisa maGIF ane hupenyu. MaGIF anonakidza uye anoita kuti vanhu vade / vataure pamusoro pavo (kubatanidzwa kwakawanda).
Bvunza mhinduro (pane chimwe chigadzirwa chauri kushandira) uye mazano (ezvezvigadzirwa zvitsva zvinoda vanhu). Zvinoshamisika kucherechedza kuti vangani vevateveri vako vane imwe mhinduro kana zano (asi nyarara nekuti hapana akavabvunza).
Kupusha kusetsa mumaposita ako. Iko kuseka kweapo neapo kunokwezva kwakawanda kufarira / kugoverana kana kunyangwe makomendi pane dzimwe nguva - zvese zvinotungamira mukubatana kwakawanda uye nekudaro, kwakawanda kusvika.
Do ongororo uye mapurisa (uchishandisa zvisikwa zvevoruzhinji munzvimbo dzakaita seFacebook, Twitter). Kunyangwe idiki seti yevanhu vanotora chikamu muvhoti inobatsira kuwedzera kubatanidzwa kwako uye kusvika nyore.
Tora chikamu chakakodzera Twitter chats nekuti kubatanidzwa kunowanzo kuve kwakakwira panguva yekutaurirana kweTwitter nekuda kwezvikonzero zvakasiyana (huwandu hwetweets, mukurumbira we #hashtag, chat-munharaunda nezvimwewo)
Got kuongorora kwevatengi? Vagovane navo pane ako ehukama profiles uye tag vatengi vakupa iwe wongororo / chiyero.
Nguva dzose sarudza maminetsi mashoma ezuva rako kuti uwane uye tevera vanhu vanokodzera kubva kune yako indasitiri / musika. (Unofanira zvakare kushandisa maturusi anoitira izvi iwe)
Ratidza mafeni ako kuti kune munhu kuseri kwechibatiso - nekushandisa Emoticons sevamwe vanhu.
Goverana zvirimo zvirimo panguva mazororo uye zvimwe zviitiko zvemwaka. Iyi posvo inowanzo kuve neyakaenzana yekubata chiyero kupfuura zvimwe zvakajairwa.
Ratidza kuonga; tenda vateveri vako nezviitiko zvakakosha (uye zvakajairika) uye vateveri vako vachabatana newe.
Tsvaga kuti chii chiri nguva yakanakisa yekutumira (zvinoenderana nehuwandu hwevateveri vako) uye tumira panguva dzino. Iwe unofanirwa kukwidziridzira ako mapositi kuti uwane kusvika kwakawanda nekuti izvo zvine mhedzisiro yakanangana nekubatana muzviitiko zvakawanda.
Kana iwe uchida kuti vanhu vabaye, taura izvozvo zvakajeka. "Dzvanya pano kuti uwane zvimwe." Zvinyorwa ne Kushevedza-kune-chiito zvinyorwa zvinoita zvirinani mukubata vanhu.
Bvunza vateveri vako kuti "Tag shamwari". Vanhu vazhinji vanoita uye izvo zvinongowedzera kusvika nekusangana pane yako posvo.
Zvemagariro zvinyorwa zvinoita sekusvika zvakanyanya kana iwe tag nzvimbo kwavari.
Tose tinoziva mifananidzo yemifananidzo tora kubatanidzwa (zvese paFacebook neTwitter). Asi tarisa kune akanakisa-mafoto kana iwe uchigovana iwo.
Uyewo, kumbira vanhu kuti vataurezve kana kugovera zvakajeka. Izvi zvinotevera mutemo weCTA.
Wawana sosi yaibatsira? Kana mumwe munhu akabatsira iwe mune rako bhizinesi? Vape iyo mheremhere, vataure uye ita kuti vateveri vako vazive.
Muchinjikwa-kukurudzira nhoroondo dzako dzemagariro pane dzimwe nzira dzevanhu. Une hukuru hwePinterest bhodhi? Usakanganwa kusimudzira yako Pinterest bhodhi paFacebook kana paTwitter (kana dzimwe nzvimbo) imwe neimwe kamwe muchinguvana.
Shanda pamwe uye mudiwa pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvinozivikanwa / mabhizinesi mukugovana zvinyorwa kana kugadzira zvinopihwa. Kubatana kunokubatsira iwe kusvika kune mamwe mafeni (kubva kune mamwe mabhureki), inowedzera kubatanidzwa uye nhamba yevateveri vauinavo.
Tags: branexbuzzsumoKubatanaFacebooksei kutiinfographicInstagramlive videosemrushkubatana kwenhauTwitter